Cima ifolda yeWindows.old -Cima yangaphambili Windows 10 ufakelo
ikhaya/11 Windows/Cima ifolda yeWindows.old -Cima yangaphambili Windows 10 ufakelo
Susa idatha yakudala emva kokuphucula ukuya kwiWindows 11 yendawo yokugcina
Vangelis6. October 2021
Emva kokuvula iWindows 10 11 Windows idatha yakudala igcinwa kwifolda yeWindows.old. Le folda ithatha indawo exabisekileyo ukuba i-hard drive incinci kakhulu. Kule miyalelo siza kukubonisa indlela yokucima ifolda endala.
Xa utshintshela kuhlobo olutsha lweWindows 11, iiWindows zigcina ngokuzenzekelayo ingxelo yakudala ngeenkqubo kunye noseto kwifayile ye- Ifolda yeWindows.old. Ezi folda zihlala kwiigigabytes ezininzi kwihard drive.
Emva kokuba unayo Ukuphucula kwiWindows 11 uneentsuku ezili-10 zokubuyela Windows 10.
Ngaba kufuneka ndicime iifestile ezigugileyo?
1 Ngaba kufanelekile ukuba ndiyicime windows ifolda?
2 Cima endala Windows 10 ufakelo-cima ifolda yeWindows
3 Susa iWindows.old usebenzisa iDisk Ukucoca
Abaninzi bayazibuza ngoku ukuba kutheni ndifanele ndisebenzise iWindows.old ifolda Icacile? Kukho izizathu ezininzi zoku.
Ufake iWindows 11 kwaye wanelisekile ngokupheleleyo.
Abacwangcisi ukurhoxa 10 Windows
Indawo yokugcina kwi ihadi diski icacile.
Windows 11 isebenza kakuhle emva kophuculo kunye namaxwebhu kunye izilungiselelo zithathwe ngokuchanekileyo.
Cima endala Windows 10 ufakelo-cima ifolda yeWindows
Unokufikelela kwimisebenzi emininzi kusetyenziswa useto lweWindows 11. Kwakhona iifayile zethutyana kwaye Inguqulelo yakudala yeWindows makususe ngonqakrazo olumbalwa.
Qala useto lweWindows. Eyona ndlela ilula yokwenza oku kukudityaniswa kwesitshixo Iifestile + i. Unokuklikha kwimenyu yokuqala kwaye uqhubeke Useto.
Nje ukuba useto luvule, cofa ku "Inkqubo" .
Cofa ngasekhohlo "Ugcino".
Kwiskrini esilandelayo, cofa "Idatha yethutyana" phantsi kwediski enzima (C :). Uninzi lwexesha, inkcazo yi "Local Disk".
Windows 11 ikhangela ikhompyuter kwiifayile zethutyana. Emva kokuba uphando luphelile, khetha into "Ufakelo (lwe) lwangaphambili lweWindows ". Unokukhetha amanye amanqaku. Cofa kwindawo ephezulu "Cima idatha."
Susa iWindows.old usebenzisa iDisk Ukucoca
Ukucocwa kweDiski ngumsebenzi phantsi kweWindows 11, apho unokucima khona iifayile kunye nefolda yeWindows.old ongasayifuniyo. Okokugqibela, kuya kubakho iifayile zethutyana kunye nezindala Windows Susa uguqulelo olususwe kwi-hard drive C:.
Qalisa ukucoca i-hard drive ngokusebenza "Ukucocwa kweDiski" kukhangelo lweWindows 11.
Ukucocwa kweDiski iwindow Iifestile (C :) iya kuvulwa. Cofa Kulungile ukuqala ukucoca.
Kwiwindow evuliweyo usenokukhetha ngesandla ukuba yintoni ekufuneka isuswe. Beka uphawu lokukorekisha ecaleni kwe Msgstr "" "Ukufakwa kwe (Windows) zangaphambili".
Cofa apha OK. Uya kufumana lo myalezo: "Ufuna ngokwenene ukucima ezi fayile ngokungenakujikwa? ". Cofa apha "Cima iifayile".
Hlela kwakhona iWindows 11-gcina idatha yobuqu
Windows 11: Uyicofa njani inkqubo kwibar yomsebenzi
Windows 11: Buyisela imenyu yokuqala yakudala
Backup kwaye ubuyisele irejista yeWindows yeWindows 11
Fihla iifayile kunye neefolda ngaphakathi Windows 11